Quel maquillage pour yeux bleus cheveux chatains - Passion Makeup
Accueil Yeux Quel maquillage pour yeux bleus cheveux chatains
Comment se maquiller pour faire ressortir des yeux verts ?
Comment reconnaître des yeux noisette ?
Kusimbisa maziso egirini, farira mimvuri inosiyana neyegirini. Saka isu tinosarudza mumvuri weziso mumvuri pakati pe plamu, pink, coral uye vermilion, zvinoenderana nemugove wegirini kana webhuruu mune yako iris.
Kujekesa maziso ako akasvibira, zvirinani kubheja pamatani ari padhuze nepepuru anoenderana negirini. Saka sarudza pinki, yepepuru, lilac, cranberry, eggplant, kana kunyangwe mauve.
Kuunza kusimba kumeso emeso echiedza, iyo yakanaka ichave yekugadzira musiyano uchishandisa rima ziso mimvuri. Iyo plum kana yakasviba brown eyeshadow ichaenda zvakakwana nemeso ebhuruu. Iwe unogona zvakare kushandisa grey uye nhema toni, kuwana « inoputa ziso » uye kusimbisa iko kutaridzika.
Zvemanheru, kubheja pameso anopfungaira-eziso akagadzirwa neyemhangura-shava uye iridescent eyeshadows kana plamu negoridhe mumvuri. Semuenzaniso, isa glitter plum eyeshadow pese pa mobile eyelid yako, wobva wadonhedza rakasviba ruvara senge rakasviba grey muchikanda cheziso rako.
Cela pourrait vous interrésser : Quelle palette choisir yeux bleus
Pasina kuenda kusvika pakushandisa tsvuku chete, dzidza kupfeka magadzirirwo ako nematoni akakomberedza tsvuku: pink, yepepuru, mhangura … Eyeshadows, blushes uye lipstick mune yakatsvuka palette ichave yako yakanakisa midziyo yekuisa pachena maziso ako egirini uye mechi vhudzi rako shava.
– Kune maziso e brown ane green green, tinogona kuenda kune burgundy eyeshadows. – Kune maziso mashava ane hazelnut undertones, yegoridhe, khaki uye eyeshadows eyeshows ichave akakwana. Ongorora: dema kana rima bhuruu inopfungaira maziso anoita kuti brown maziso aonekwe zvakanyanya kunyanya!
Saka kutsvukirira kweorenji kwakanyungudika pane eyelid nepenzura yakasvibira ine eyelashes inokwana kuisa pasi maziso ako. Zviripachena orenji hazvireve hazvo kuti zviri nyore kupfeka zuva nezuva, asi zorora nekuti ese mashava shades anokodzerawo nemaziso ebhuruu, saka enda kune brown, taupe, nhema, grey …
Kuti udzidzise, ​​shandisa mwenje weziso wakajeka mukati meziso nekuutambanudza kunze kubva paziso reziso. Isa iwo mumvuri mumwechete pasi pehuma pfupa uchisanganisa. Wobva wagadzira ziso nemumvuri wakasviba kutanga kubva pakati peye eyelid kunze. Sanganisa zvakanyanya sezvinobvira.
Kana iwe uine maziso ebhuruu, iwo mavara anozoita kuti maziso ako abude zvakanyanya anozoita orenji, kana toni dzakabatana sedzemhangura kana goridhe.
Mhangura, yepepuru kana khaki eyeshadows Kuti tibudise girini kupenya kweedu irises, isu tinoshandisa burgundy, yepepuru eyeshadows, mhangura-yegoridhe toni, yakanyatso kudziya browns, uye khaki kana bronze eyeshadows. Pamusoro pazvose, isu tinotarisira kuti tidzivise akanyanya kutonhora mavara senge girini, turquoise, kana kunyangwe sirivheri.
Cela pourrait vous interrésser : Quel fard à paupière pour les yeux marrons
Meso aHazel anotenderera pakati pegoridhe, shava uye girini. Ruvara rwavo runotarisisa nharaunda uye runogona kuita serunochinja ruvara, zvinoenderana nechiedza, mavara aunopfeka kana makeup yako.
Mazhinji maziso e-hazel ane zvindori zvakaringana, zvine bhuruu kutenderedza mwana, kozoita mhete yegirini uye dzimwe nguva goridhe kana grey. Ruvara rwekunze haruwanzo kuve rwakasimba. Inowanzo kuve nemavara negoridhe, girini yakasviba, brown kana bhuruu.
Article précédentQuel Covergirl cosmetics avis ?
Article suivantQuel fond de teint à 50 ans